Waa maxay Remy Hair?
Timaha Remy waa timo leh caleemaha ay ku siman yihiin isla jihada. Qajiyadu waa miisaannada dhaadheer ee mashiinka timaha. Marka ay la jaanqaadaan isla jihadaas waxay hoos u dhigeysaa isku-dhafka. Timaha Remy waa tayo sare leh.
Imisa ayaa la socda maraakiibta? Mudo intee leeg ayaa maraakiibta qaata?
Fiiri Siyaasadda Gaadiidka.
Imisa xabbo oo timo ah ayaan u baahanahay?"
Saacaddayadu waxay ku saabsan tahay 3.5 oz xidhmo xidhis (bixiso ama qaado .2 oz) sidaa daraadeed waxaan ku talineynaa kuwa soo socda:
Wixii Perm Yaki, Coarse Yaki iyo Kinky Straight Textures waxaan ku talineynaa kuwan soo socda
Nooc dherer ah oo ku saabsan 1 - 1.5 xirmooyinka (badhkaaga timahaagu waa banaanka)
Qayb ka mid ah qashin-saarka ku saabsan xirmooyinka 2-2.5 (qaybta iyo dhinacyada bidixda)
Dumarka oo dhameystiran oo ku saabsan xirmooyinka 2.5 - 3.0 (timo lama tagin)
Ku dhaji dhar si aad u xidhid xirmooyinka 2 iyo xidhitaan
haddii aadan weli hubin xaddiga aad u baahan tahay fadlan noogu soo dir email u soo dir dokumaysiga, dhererka, iyo qaabka aad rabto waanna kaa caawin doonaa.
Wixii ciriiri ah, Kinky Curly & Qaababka dhuxusha ayaan ku talinaynaa kuwan soo socda
Qayb ka mid ah alwaaxyada ku saabsan xundhurta 2.5 (qaybta iyo dhinacyadu waa baxaan)
Daawada Afro Kinky waxaan ku talineynaa kuwan soo socda
Nooc qiyaas ah oo ku saabsan xundhurta 1 (badhkaaga timahaagu waa banaanka)
Qayb ka mid ah caleemo qashinka ah oo ku saabsan xirmooyinka 1.5-2.0 (qaybta iyo dhinacyada bidixda)
Dumarka oo dhameystiran oo ku saabsan xirmooyinka 2.o - 2.5 (timo lama tagin)
*** Xirmooyinka dhaadheer waxay leeyihiin gaaban yahiin sidaa daraadeed qaababka dhererka leh 20 "ama in ka badan waxay ku daraan xirmo dheeraad ah liiska kor ku xusan si loo gaaro dhumuc.
Sidee ayaan u arkaa ikhtiyaarka aan ku dooran karo midabka aan doonayo?
Kordhinta noocyadeena waa midabka Virgin. Tani waxay ka dhigan tahay in aysan ahayn midab lagu daweynayo si kasta oo looga hortago isticmaalka kiimikada. Dhammaan ballaadhanka ayaa ku imaan doona midabkooda timo dabiiciga ah kaas oo ah madow si aad u madow. Si kastaba ha noqotee timaha waxaad ku dhejin kartaa midabka aad u baahan tahay.
Miyuu dhali karaa timo ama miiray?
Haa way awoodi kartaa. Xusuusnow tani waa timo bini'aadan oo dhab ah Ka taxadar markaad cadeyneysid. Xoqidda timaha waxay keeni kartaa kiimikada dabacsanaanta qaabka curlka. Mar walba u fiirso xirfadle ah daaweyn midab leh. Inkasta oo aan sheegeyno in timaha ay noqon karto mid midab leh oo aan lahayn wax dammaanad ah oo tayo leh ka dib markii wax ka bedelaan kiimikada.
Ma i Fariisan karaa dhoobada timaha?
Wixii Perm Yaki iyo Kinky Straight haa waad ka fariisan kartaa timaha dhirta, Si kastaba ha noqotee qumaatada aadka u kariimka ah waxaad kuxidhi kartaa birta laakiin laguma soo celin karo. Muuqaalkan ayaa la cadeeyay si loo gaadho heerarka quruxda badan ee 3c-4c iyo kulaylka xad dhaafka ah waxay keeni kartaa dabacsanaan yar oo ah qaabka curlka. Fadlan isticmaal kuleyliyaha kuleyliyaha haddii aad dooranayso inaad birta kuxirtid oo aad u isticmaashid dhammaan dokumintiyada
Sidee ayaa timaha loo cabbiray?
Timaheena waxaa lagu qiyaasaa xaaladdeeda kala-goyska oo ka timi tuugada ilaa hoose ee timaha timaha. Timaha laguma qiyaaso xaalad adag / dalxiis.
Perm Yaki Collection waa run in dhererka (lahayn hoos u)
Kombuyuutarada Kaksi Yaki iyo Kinky Qalabka Qadiimka ah waxay la kulmi doonaan 1 / 2 "oo ka mid ah hoos u dhaca (tusaale ahaan haddii aad dalbato 16" waxaa laga yaabaa inay tahay 15.5 "sababtoo ah qaabka kinky)
Qariidada Qaybinta Kala-soocista (fiiri faahfaahinta hoose ee loogu talagalay cirbadda yar)
10 "xirmooyinka = 5" - 6 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
12 "xirmooyinka = 6" -7 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
14 "xirmooyinka = 7" - 9 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
16 "xirmooyinka = 9" - 10 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
18 "xirmooyinka = 11" -12 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
20 "xirmooyinka = 13" -14 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
22 "xirmooyinka = 15" - 16 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
24 "xirmooyinka = 17" -18 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
26 "xirmooyinka = 19" -21 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
28 "xirmooyinka = 22" -23 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
Kinky Curly iyo Coily Collection ayaa leh hoos u dhac weyn (fiiri faahfaahinta hoose ee Coily iyo Kinky Curly Disk)
10 "xirmooyinka = 4" - 5 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
12 "xirmooyinka = 5" -6 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
14 "xirmooyinka = 6" - 7 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
16 "xirmooyinka = 8" - 9 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
18 "xirmooyinka = 10" -11 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
20 "xirmooyinka = 12" -13 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
22 "xirmooyinka = 14" - 15 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
24 "xirmooyinka = 16" -17 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
26 "xirmooyinka = 18" -20 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
28 "xirmooyinka = 20" -22 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
Afro Kinky wuxuu leeyahay hoos u dhac aad u daran (fiiri tafaasiirta hoose ee AK-ga)
16 "xirmooyinka = 7" - 8 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
18 "xirmooyinka = 8" -9 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
20 "xirmooyinka = 9" -10 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
22 "xirmooyinka = 10" - 11 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
24 "xirmooyinka = 11" -12 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
26 "xirmooyinka = 13" -14 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
28 "xirmooyinka = 14" -15 "aan la soo saarin (tani waa qiyaasta kaliya)
Waa maxay qaabka aan u soo iibsado?
Waxaan si faahfaahsan u faahfaahineynaa walax kasta oo ka mid ah sharaxaadda badeecada, si kastaba ha ahaatee haddii aadan weli hubin taasoo ka soo baxday midabada ugu wanaagsan ee timahaaga markaa waxaad iibsan kartaa noo Shaxanka Muunada: Tixraac halkan.
Mudo intee le'eg ayay timi doontaa timahayga?
Nasiib darro ma siin karno wakhti sax ah si aan uga jawaabno su'aashan. Si kastaba ha noqotee haddii timaha si habboon loo daryeelo loona daweeyo si fiican macaamiishayadu waxay dib u isticmaali karaan timaha. Wixii dayactir habboon iyo macluumaad dheeraad ah fadlan booqo annaga Miiska Daryeelka Timaha.
Waa maxay saacadahaaga ganacsiga?"
Foomka xiriirka emailka waxaa la heli karaa 24-7. Wakiil ayaa ka jawaabi doona sida ugu dhakhsaha badan.
Waa maxay siyaasaddaada soo noqoshada?
Fadlan fiiri ku soo laabto siyaasadda.
Maxaan lacag u bixin karaa internetka?
Sababtoo ah khayaanada internetka iyo khayaanada khayaanada ee khiyaanada leh waxaanu kaliya aqbaleynaa lacagaha macaamiisha kuwaas oo bixiyay cinwaan cad. Haddii cinwaankaaga biilasha / biilka laguu xaqiijiyo aan la xaqiijin ama aad dhibaato ku qabin inaad bixiso amar ah fadlan nagula soo xiriir email ahaan magacaaga iyo lambarka telefoonkaaga waxaanan ku siin doonaa hab kale oo lacag bixin ah. Hababka kale ee lacag bixinta waxaa ka mid ah amarada lacagta, ururada reer galbeedka, lacag caddaan ah, iyo lacag caddaan ah.
Ma haysataa barnaamijka jumlada ah?
Nasiib daro maaha inaan sii wadno wada-hawlgal kasta oo isdaba jooga ah. Si kastaba ha ahaatee waxaad ku biiri kartaa noo Barnaamijka xafiisyada shirkadda!
Mishiinka Weft iyo Wied Weft?
Gacan-qabka gacanta ku xiran waa mid khafiif ah. Waxay yareeyaan bulkiness marka timaha lagu dhajiyo. Laakiin sababta oo ah waxay dhuuban yihiin waxay leeyihiin timo yar oo loo socdo halkii marxalado badanaana loo baahan yahay si loo abuuro buuxda. Makiinadda mashaqadu way yar tahay marka la gooyo ka dibna gacmaha lagu xidho. Qalabka Timaha Wareegga Dabiiciga ah wuxuu jecel yahay inuu isticmaalo mashiinada culeyska sababtoo ah cimriga iyo dhumucdooda.